Ady amin’ny tazomoka : rarahana fanafody moka ny EPP | NewsMada
Par Taratra sur 16/09/2016
Nisantarana ny famendrahana odimoka, omaly, ny ao amin’ny boriborintany faharoa ny EPP Ampamantanana, Ambohitsoa ary Ambohimiandra. Namendrahana fanafody ny efitrano fianarana, ny trano fivoahana, ireo faritra manodidina ny sekoly, indrindra ny misy lobolobo na tatatra.
Hatomboka rahampitso ny eny amin’ny boriborintany fahefatra amin’ny alalan’ny EPP Soanierana I sy ny EPP Ankaditoho. Eny amin’ny boriborintany voalohany, ny EPP III-G Hangar, ny EPP Antanimena I ary ny EPP 67 Ha Sud.
Mbola mitohy koa ny famendrahana fanafody eny anivon’ny fokontany samihafa izay efa natomboka ny 1 septambra lasa teo.
Ny boriborintany fahenina no hanatanterahana izany mandritra ny hateloana. Tao amin’ny fokontany Ankazomanga-Atsimo sy ny fokontany Andraharo no natao ny alarobia teo. Teny Anosivavaka sy Antanety-Avaratra kosa, omaly, ary eny Ambohimanarina sy Amboavahy ny anio. Mpanatanteraka ny asa ny ekipa teknika avy ao amin’ny BMH.